Mayur Times || मयूर टाइम्स || Authentic news from Nepal, Business Politics Society Art and many more ... » पत्नी स्वेताको यो बानी देखेर आदित्य चकित, गरे यस्तो खुलासा….
पत्नी स्वेताको यो बानी देखेर आदित्य चकित, गरे यस्तो खुलासा….
२०७७ मङ्सिर २६ गते शुक्रबार ०१:५७
गायक तथा टिभी उद्घोषक आदित्यनारायण झा आफ्नी प्रेमिका स्वेता अग्रवालसँग हालै विवाह बन्धनमा बाँधिएका छन्। बिहेपछि यो जोडी सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चित छ। यो सुन्दर जोडीको प्रत्येक फोटोहरू सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल बनेका छन्...
गायक तथा टिभी उद्घोषक आदित्यनारायण झा आफ्नी प्रेमिका स्वेता अग्रवालसँग हालै विवाह बन्धनमा बाँधिएका छन्। बिहेपछि यो जोडी सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चित छ। यो सुन्दर जोडीको प्रत्येक फोटोहरू सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल बनेका छन् भने अनेक रमाइला कुराहरू बाहिरिएका छन्।
आदित्यनारायणले बिहेपछि धेरै अन्तर्वार्ताहरू दिएका छन्। जसमा उनले पत्नी स्वेताका बारे धेरै कुरा खुलाएका छन्। आदित्यलाई मन पर्ने स्वेताका बानीहरू र आफूलाई अचम्मित बनाउने उनका कुराहरू पनि आदित्यले खुलाएका छन्।
एउटा समाचार मिडियालाई दिएको अन्तर्वार्तामा आदित्य भन्दछन्, “मलाई अचम्म लाग्छ, स्वेताले केई नगरिकन आरामले समय बिताउन सक्छिन्। उनी निकै अल्छी छिन्। मेरो नजरमा स्वेता कत्ति पनि महत्वाकांक्षी छैनन्। उनको यो बानीले म चकित परेको छु।”
प्रकाशित मिति २६ मंसिर २०७७, शुक्रबार १३:५७